Zvinorevei "Zvekushambadzira Kwazvo" | Martech Zone
Semunhu akaitwa basa kunze kwezviri mukati, kutaurirana, uye kutaura nyaya, ini ndine nzvimbo yakakosha mumoyo mangu yebasa re "mamiriro". Zvatinotaurirana - kungave mubhizinesi kana muhupenyu hwedu pachedu - zvinova zvinoenderana nevateereri vedu chete kana vanzwisisa mamiriro eshoko racho. Pasina mamiriro, chirevo chakarasika. Pasina mamiriro, vateereri vanovhiringidzika nezvekuti sei uchitaurirana navo, izvo zvavanofanirwa kutora, uye, pakupedzisira, nei meseji yako iine chekuita navo.
Kudzokororazve ndiyo yechinyakare (uye inosemesa) muenzaniso webhizimusi mamiriro gaffe. Iko kune chimwe chinhu chawakatarisa munguva yakapfuura chinoramba chichikutevera mune ino nyangwe iwe uchiri kufarira kana kwete. Kuona kushambadzira kwemasokisi pandinenge ndakatarisa kune webhusaiti yezvinangwa zvebhizimusi hakusi kwenzvimbo, saka kunze kwemamiriro. Asi mhosho zhinji dzemamiriro ezvinhu dzinoitika mukutaurirana — kana chimwe chinhu chawataura chikaguma nekusajeka kana kutaridzika kutarisa, unoziva iwe unofanirwa kupa yakawanda mamiriro ezvauri kutaura kana kubvunza.
The Oxford English Dictionary inotsanangura izwi "mamiriro" nenzira iyi:
Mamiriro ezvinhu anoumba marongero echiitiko, chirevo, kana zano, uye nezvazvingaitwe zvizere kunzwisisa uye kuongororwa: sarudzo yakatorwa mukati memamiriro e rakarongwa kuderera mukushandisa
Izvo zvikamu zvechimwe chinhu chakanyorwa kana kutaurwa icho pakarepo tanga uye tevera izwi kana ndima uye kujekesa zvarinoreva: kugadzirisa izwi inokanganiswa nemamiriro ezvinhu mune mazwi anooneka
Saka kana isu tikashandisa iyo tsananguro yemamiriro kune tsika yekushambadzira, uko "kushambadzira" kunosanganisira kutaurirana yakatarwa meseji kune vateereri, saka vatengesi vanofanirwa kutarisisa kune izvo zvinotungamira kana zvinotevera kuendesa kwavo meseji. Zvirinani kana vachida kuti vateereri vanzwisise zvinoreva kana kukosha kwezvavari kutaurirana.
At Sitecore, taenda kusvika pakuti vatengesi nevatungamiriri vemadhijitari vanokwanisa chete kubata nemazvo ruzivo rwevatengi pavanenge vachishambadza maringe nemabatiro avanoita vatengi nemhando yavo. Mazhinji ekushambadzira otomatiki workflows anoita kuyedza pakushambadzira kwemamiriro (semuenzaniso, kana vatengi vachirodha pasi chena bepa, saka bhurocha rinotumirwa email kwavari mavhiki maviri gare gare). Asi iro dambudziko nemazhinji ekushambadzira otomatiki mapuratifomu ivo vanongofunga nezve maitiro kune email. Ivo havatarise izvo izvo mushandisi angave akaita mushure mekurodha pasi chena bepa. Ko kana vakapedza maawa pawebhusaiti? Kana tweet nezve chena bepa mangwana acho? Haungade here kuteedzera nekukurumidza kupfuura mavhiki maviri?
Kubudirira kwemamiriro ekushambadzira kunoda zvinopfuura izvo zvinogona kushambadzira otomatiki. Tinotenda zvinotora tekinoroji inogonesa matatu mabasa:
Iko kugona kwe unganidza mamiriro ehungwaru pamusoro pezvinoitwa nevateereri vako, chero kwavari, pamberi unosvika kwavari. Mune mamwe mazwi, seOED inoti, chii chinotangira ndima yako.
Iko kugona kwe gadzirisa zvemukati zvemadhijitari, kana ndima, pachayo. Uye kana uine vatengi vazhinji, iwe unoda kuve nechokwadi kuti iwe unogona kuzviita pachiyero, nyore.
Iko kugona kwe isa izvo zvirimo chero kungave mutengi wako, pane chero chishandiso, munzira yekuzvitenderedza kuitira kuti zvimwe zvakafanorondedzerwa zviito zvevateereri zvinokonzeresa kuunzwa kwemukati Uye zvinoitika munguva yaunotsanangudza. Mune mamwe mazwi, iwe uri mukutonga kwezvavanoona uye kana vachizviona sekureba seyako mamiriro enjere nezve ruzivo rwavo kukuudza kuti vakagadzirira kudya izvo zvaunofanira kuendesa.
Zviri nyore, chaizvo, asi tekinoroji iyo inogona kuita kuti zviitike yakaoma kunzwisisa. Takanyora nezve kushambadzira kwezvinyorwa mubhuku idzva richangoburitswa, rakanzi "Context Kushambadzira KwemaDummies. ” Takashanda naWiley Press (uyo anodhinda mabhuku ane mukurumbira e "For Dummies" aunowana muchitoro chemabhuku) kuigadzira, uye inovhara:
Vashandisi vemadhijitari zvachinja uye nei tarisiro yavo yemabhenji iri kuchinja
Mashandisiro emamiriro ezvinhu anokubatsira sei kusangana nezvinotarisirwa nevatengi
Izvo zvaunoda mukushambadzira tekinoroji kununura pane chivimbiso chekushambadzira kwemamiriro
Kune zvimwe, asi aya ndiwo makiyi ekutora. Tinovimba unorifarira, uye kuti ndakakupa mamiriro akakwana pamusoro pebhuku saka unoona kukosha kwekurodha pasi. Mushure mezvose, ngazvive kure kubva kune uyu wemusika mushambadzi kuti utaure pasina mamiriro. Ndizivise zvaunofunga nezvebhuku mune zvakataurwa pazasi!
Dhawunirodha Context Kushambadzira kweDummies
Tags: chinyorwakushambadzira kwemamirirokushambadzira kwechinyorwa chemadummieskushambadzira kwemamirirodummiesnzvimbowiley
As Sitecore's VP Yemukati Yekushambadzira, Edhita-mu-Chief, Charlotte anotarisira zano uye kuronga kwezvinhu zvemukati zvinosanganisira ma ebook, mavhidhiyo, uye mapepa machena anoenderana nekuendesa kukosha kwevatengi veSitecore netarisiro. Iye anofarira zvekunzwisisa zvinodiwa nevateereri nematambudziko sezvaari nezveSitecore uye neyekushambadzira tekinoroji nzvimbo.
Chiremera: Icho Chinoshaikwa Chizhinji cheMukati Maitiro
Apr 9, 2016 pa 6: 45 AM